Tremor လက်တုန်ခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အမျိုးသားပါ။ အသက်ကတော့ ၃၈နှစ်ပါ။ လက်အရမ်းတုန်တတ်တာပါဆရာ။ အသက် ၂၀ ကျော်ထဲကစဖြစ်တာပါ။ အာရုံစိုက်ရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ ဥပမာပေါ့ဆရာ ဝက်အူလှည့်ရင်တောင် ဝက်အူခေါင်းအပွင့်ကို screw driver တပ်တာကို လက်၂ဖက်နဲ့ကိုင်ပြီးတပ်ရတဲ့အထိ ဆိုးပါတယ်ဆရာ။ ဘာဆေး သောက်ရမလဲလို့ လမ်းညွှန်ပေးပါဆရာ။
၂။ ဆရာ ငယ်စဉ်အချိန်မှစ၍ ယနေ့အသက် ၃ဝ ကျော်သည်အထိ ကျနော်ဟာ စိတ်လုပ်ရှားတိုင်း လက်တွေတုန်နေတတ်ပါသည်။ ဆေးပညာရှုထောင့်မှ ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်။
၃။ ဆရာ သမီးသိချင်တာလေးရှိလို့ မေးခွင့်ပြုပါ။ သမီးအမေက အသက် ၅၈ နှစ်ရှိပါပြီ။ အဲဒါ ခုတလောအမေက ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုကိုင်ရင် လက်တွေတုန်နေပါတယ်။ သမီးလည်း အဝေးမှာနေတာဆိုတော့ ခုမှသတိထားမိလို့ မေးကြည့်တော၊ လက်တုန်တာ့ ၄ လလောက်ရှိပါပြီတဲ့။ အဲလိုလက်တုန်တာ အသက်တော်တော်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တာပဲ မြင်ဘူးလို့ပါ။ ဘာဖြစ်တာလဲမသိလို့ သမီးစိတ်ပူလို့ပါ။ သမီးကိုဆက်ဆက်ပြန်ဖြေပေးပါဦးနော်။ တုန်တဲ့ဘက်က ညာလက်ပါရှင်။
၄။ ကျနော့မှာ လက်တုန်တတ်တဲ့ အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်။ ၁၉ နှစ်သားလောက်မှာ စတင်သတိထားမိလာတယ်။ ခုဆိုရင် ကျနော့ အသက်က ၂၉ နှစ်ပါ။ မိဘ ဆွေမျိုးတွေမှာလည်း ဒီလို မရှိပါဘူး။ အရင်ကဘာမှ မဖြစ်သလို အရေးမကြီးသလို နေခဲ့ပေမဲ့ ခုဓါတ်ပုံရိုက်တော့ လက်ကတုန်နေတော့ သိပ်အဆင်မပြေဘူး ဖြစ်လာတယ်။
Tremor ဆိုတာ Involuntary စိတ်ကနေ ထိန်းမရာတမျိုး ဖြစ်တယ်။ Rhythmic စည်းချက်ကျကျလိုလဲ ဖြစ်နေမယ်။ Muscle contraction and relaxation ကြွက်သားတွေ ညှစ်လိုက်-လျှောလိုက်ဖြစ်နေတယ်။ To-and-fro movements ရှေ့-နောက် လှုတ်ရှားမှု ဖြစ်နေမယ်။ Oscillation တုန်ခါနေမယ်။ Twitching ဆတ်ဆတ်ခါ နေမယ်။ ခေါင်း၊ လက်-ခြေ၊ မျက်နှာ-မျက်ခုံး တကိ်ုယ်လုံးမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ လက်၊ လက်ချောင်းနဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ဘယ်နေရာမဆို တုန်တာကို Tremor ခေါ်တယ်။ အသံတုန်တာလဲပါတယ်။ အဓိက (၃) မျိုးရှိတယ်။
အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက်ကြီးရင် ပိုဖြစ်တယ်။ စိတ်ဖိအားများနေချိန်၊ ပင်ပန်းနေချိန်၊ ကြောက်စိတ် ဝင်နေချိန်၊ ကော်ဖီ-ဆေးလိပ်သောက်တာ များချိန်တွေမှာ ယာယီတုန်တတ်တယ်။ အဲလိုမဟုတ်တာမျိုးကို အခြေခံရောဂါ ရှိ-မရှိ စစ်ဆေးကုသရမယ်။ Essential tremor လို့ခေါ်တာလဲ အဖြစ်မနည်းပါ။ လက်ကို အသုံးမပြုဘဲနေရင် တုန်တာမျိုး။ တခုခုလုပ်တော့မယ် စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့ တုန်လာမယ်။ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ မိသားစုထဲမှာ တယောက်မကရှိတတ်တယ်။
1. Alcohol abuse or withdrawal အရက်စွဲခြင်းနဲ့ အရက်ဖြတ်ခြင်း၊
16. Drug-induced tremor ဆေးဝါးတွေကြောင့်တုန်ခြင်း Anticonvulsants အတက်ရပ်ဆေးများ Valproic acid (Depakote), Sodium valproate (Depakene) ဆေး၊ Bronchodilators လေပြွန်ကျယ်ဆေးများ Theophylline and Albuterol ဆေး၊ Immunosuppressants ခုခံအားဆေးများ Cyclosporine ဆေး၊ Mood stabilizers စိတ်မူပြောင်း ကုသဆေးများ Lithium carbonate ဆေး၊ Stimulants စိတ်ကျွစေသည့်ဆေး Caffeine (ကေဖင်း)၊ Psychostimulant drug စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်ဆေးများ Amphetamines ဆေး၊ Corticosteroids (စတီရွိုက်) ဆေးများ၊ Antidepressants (SSRI) စိတ်မကျဆေးများ။